Waxyaabaha ay ka kooban tahay dawooyinka, waxyaabaha laga soosaaray dhirta, waxyaabaha lagu daro cuntada, waxyaabaha ay ka kooban tahay dhirta, taxanaha bayoolaji blog-medicinerawmaterials.com
Waxyaabaha ay ka kooban tahay dawooyinka
Ku darida nafaqada
Qurxinta OEM & ODM
8: 30-18: 00, Isniinta - Jimcaha
Soo bixida Stevia
Sawir qaade 2959
Miraha Qaraha Midab Dheeraad ah…
Anionic Is Emulsifyi…
Soosaarida Midhaha Qaraha
Macaan Berry macaan (Macaan…
Dhagax cagaaran > blog
Tiro badan oo waashooyinka qalliinka ee la tuuro ah ee ilaaliya aga…
Sababtoo ah faafitaanka caalamiga ah ee 'COIVD-19', waxaa aad u yaraaday waji-xidhasho iyo reagent tijaabooyin dalal badan. Si aan ugu mahadnaqno macaamiisha, waxaan siin doonnaa 100 + waji qalliin oo la tuuri karo ama 50 + SARS-CoV-2 IgG / IgM Tijaabooyin Degdeg ah macaamiil kasta oo duug ah haddeer. Hadaadan waligaa la shaqeyn laheyn kombuyutarkayaga…
Saamaynta Phellinus Igniarius Extract
Phellinus Igniarius dhab ahaantii wuxuu ka tirsan yahay tonic maxaa yeelay dadka qaata ka dib markay cabbaan biyaha waxay daaweyn karaan noocyo badan oo cuduro leh saameyn muhiim ah oo ku habboon isticmaalka muddada-dheer; Tusaale ahaan, astaamaha daaweynta caadiga ah qaarkood aragtida nolosha maalinlaha ah: maqaar saar la'aan, maqaar jaalle ah oo mugdi ah,
Waxyeellada ubaxyada Oleic acid
Oleic acid waa dufan la aqbalay oo dufan ku leh cuntada xoolaha. Daawada Oleic acid waxay noqon kartaa mid lagu kalsoonaan karo qalabka saliida saytuunka ee culus (yareynta culeyska dhiiga). Gubashada dufanka leh ee iskujirta ah ayaa lala xiriiriyay hoos u dhaca ku dhaca dufanka yar yar ee loo yaqaan 'LpopLin' (LDL) kolestaroolka, iyo suurtagalnimada in lagu daro lipo cufnaanta sare
Waa maxay Capsicum?
Capsicum / ˈkæpsɨkəm / (sidoo kale loo aqbalo sida basbaaska) waa astaan ​​ka mid ah dhirta ka soo bilaabata aabbeyaasha habeennada dhalaa Solanaceae. Ku biirista loo isticmaalo sida udgoon iyo khudradda aliment, Capsicum breed waxay aqbashaa sidoo kale bilaabida isticmaalka daawooyinka. Midhaha dhirta Capsicum waxay aqbalaan magacyo farabadan iyadoo kuxiran hoyga iyo…
Paeoniflorin waa ka gaabis ku saleysan Paeonia albiflora Pall. Waxay leedahay saameyn ku filan oo dawooyin ah, sida xanuun joojiye, anti-diuretic ， anti-bararka ， anti-convulsant, vasodilatic, iyo wixii la mid ah.
Waa maxay Ganoderma lucidum
Ganoderma waa nooc ka mid ah boqoshaada polypore-ka oo ku badan qoryaha, waxayna dabooshaa illaa 80 nooc, oo ka soo batay gobollada u dhow. Sababtoo ah isticmaalkooda oo dhan ee daawooyinka Aasiya ee la aqbali karo, iyo joogitaankooda ku-meel-gaadhka ah, iyagu waa astaan ​​muhiim u ah dhaqaale ahaan. Ganoderma waa lagu kala duwanaan karaa
Oryza sativa L ayaa adeegsada
Bariiska Oryza sativa wuxuu awoodi karaa ugu horreyn atamka oo sameeya qayb muhiim ah oo xagga cuntada ah oo laga helo dalal badan, si aan caadi ahayn Aasiya. Midhuhu gebi ahaanba waa alimental haddii aan la safeeyey. Gabdhaha bariiska ayaa mararka qaarkood lagu qaboojiyaa isku-dhafka alfa-jeermiska dabiiciga ah iyo dhogorta. Hilibka bariiska
waa maxay Niacin?
Niacin (oo sidoo kale loo aqbalo fitamiin B3 ama nikotiin acid) waa iskudarsanaan amoebic ah oo leh naqshadeynta C6H5NO2 iyo, waxay kuxirantahay analoogga loo adeegsado, mid kamid ah 20 ilaa 80 nafaqooyinka xoolaha. Daawada iyo niacin lagu daray ayaa ugu horreyn lagu qanciyaa madadaalo hypercholesterolemia (kolestarool sare) a…
Bogga xaadirka ah 1
Bogga ugu dambeeyay Last »
Bixi alaabooyin gaar ah / OEM / ODM, Iyadoo loo eegayo shuruudahaaga gaarka ah
Weydiinta khadka tooska ah
Cunnooyinka dabiiciga ah ee lagu daro
U dir baaritaan, hel qiimo dhimis iyo adeegyo dhammaystiran.
Xuquuqda daabacaadda © 2014 Green Stone Swiss Co., Ltd. Xuquuqda daabacaadu way xifdisan.
na soo raac, Ogeysiiska Cafiska Mas'uuliyadda